मित्रहाङ्को दाम्लोले जन्माएको प्रश्न
–एलिसा सिं “Small thing makes big difference”, हुन त प्रकृतिमा जति कुरा अस्तित्वमा छन त्यी सबै कुरा अाफैमा सानो वा ठूलो भन्ने कुरा हुदैन। सबैको अा -अाफ्नो ठाउँमा अा-अाफ्नै महत्व हुन्छ नै। यस प्रकृतिमा भएका हरेक कुरा निरपेक्ष हुन्न तिनीहरुलाइ सापेक्षमा बुझ्नु र त्यहि अनुसार ब्यबहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनिन्छ। कुनै बस्तुको बारेमा, कसैको बिचारको बारेमा, परिवारमा भएका नियमित कृयाकलापमा, सामाजिक जीवनको गतिबिधिको बारेमा...
प्रतिकुलतामा चालिएको कदम
एलिसा सिं_दक्षिण काेरिया लोकतन्त्रमा लोकको अाम भावना अनुसार शासन गरिन्छ। जनभावनानिर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट गर्ने बैधानिक प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। प्रकट भएको जनभावना छानिएको जन प्रतिनीधिबाट प्रयोग गर्नको लागि पनि तदअनुकुलको कानुनि ब्यबस्था हुन्छ नै। कानुन र कार्यबिधीले निश्चित गरेको दायरामा रहेर निर्वाचित जन प्रतिनिधिले जनताको अधिकारको प्रयोग गर्दछन। यसरि निर्वाचित जन प्रतिनिधीबाट जनभावना अनुसार काम गर्नु पर्ने नैतिक र संबैधानिक बाध्यता हुन्छ। राज्य सञ्चालनको संदर्भमा संबिधानुकुल...
घटनाभन्दा माथि विचारको तहमा बहस गर्न सक्ने नेपाली कांग्रेसभित्रका उम्दा बौद्धिक चक्र बास्तोला
शंकर तिवारी भनिन्छ, अग्लो वृक्ष ढलेपछि त्यसको उँचाइ मापन सहज हुन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको निधनपश्चात् उनको उँचाइको चर्चा शुरू भएको छ । झापाको जमीनदार परिवारमा जन्मेका बास्तोलाले दार्जीलिङको कन्भेन्ट स्कूलबाट विद्यालय तहको अध्ययन सिध्याएर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे । त्यसबेला भारतीय समाजवादीहरूको नाभीस्थल थियो, बनारस । समाजवादीहरूको सान्निध्यमा तीक्ष्ण बौद्धिक बास्तोलाको सामाजिक दायरा थप फराकिलो हुनपुग्यो । २०२० को दशकको अन्त्यतिर बनारस...
महिलामाथि हुने हिंसाको प्रमुख कारण बारे मुख खोले डा. बाबुराम भट्टराईले
महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र महिलाको सामाजिक भूमिकालाई ठीक ढंगले परिभाषित गर्ने पाटोमा रहेको त्रुटि नै मुख्य रूपमा महिलामाथि हुने हिंसाको प्रमुख कारण हो केही समययता नेपालमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन्, यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । सामान्य रूपमा महिलामाथिको हिंसा विविध रूपमा हुने गरेको सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, केही समययता मुख्य रूपमा लैंगिक हिंसाले बलात्कारको रूप अत्यन्त भयंकर ढंगले लिएको छ,...
ज्योतिष गल्ली – जहाँ हत्केलामा भाग्य खोजिन्छ !
विज्ञानलाई चकित बनाउने गरी पशुपतिको सेरोफेरोमा एउटा गल्लीको नामाकरण गरिएको देखिन्छ । पशुपति मूल मन्दिरको गेटबाट केही पश्चिमतर्फ पाइला सारेपछि भेटिन्छ, यो गल्ली । जहाँ ज्योतिषीहरू पाइलैपिच्छे ठोकिन्छन् । किनकि, गल्लीको नामै छ– ज्योतिष गल्ली । ज्योतिष गल्लीमा करिब ५० भन्दा बढी ज्योतिषी भाग्यको परीक्षा केन्द्र खोलेर बसेका छन् । जहाँ भाग्य जाँच्न आउनेहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । फेल भने कोही हुँदैनन् ! त्यसको एउटै...
बोल्नै नपाइने भइसकेको हो र ?
गोबिन्द अधिकारी ,१८ असार २०७५, संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिन रुचाउने भारत सन् २०१८ मा महिलाहरूका लागि दुनियाँमै ‘सबैभन्दा खतरनाक‘ स्थान भएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सको थम्पसन रोयटर्स फाउन्डेसनले गराएको अध्ययनले भारतको छवि यति लाजमर्दो भएको हो । यसै अध्ययनमा सन् २०११ मा भारत महिलाहरूका लागि संसारको चौथो खतरनाक देश थियो । सन् २०१२ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको निर्भया सामूहिक बलात्कार काण्डपछि...
फेसबुक च्याट’ ले फेला पार्‍यो म्यानपावरका दलाल !
दर्जी परिवारले १० वर्षपछि न्याय पायो १० असार, काठमाडौं । भनिन्छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । यस्तै भएको छ नवलपरासी गैंडाकोटको एक दलित परिवारलाई, जसको घरबास नै, विदेश पठाइदिने एक दलालले हात पारेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । आश मारिसकेको जग्गा पीडित परिवारले १२ वर्षपछि फिर्ता पाएको छ । दर्दनाक कथा कथा हो, गैंडाकोटको शक्तिटोलको । त्यहाँका दशरथ गिरीले युवाहरुलाई विदेश पठाइरहन्थे । ०६२ सालमा स्थानीय मनवीर...
रबि लामिछानेलाई अमेरिकाबाट प्रेम बानियाँको यस्तो सन्देश, धुर्मुस-सुन्तली देखि दिपकराज गिरी सम्म कसले के भने ? – पढ्नुहोस्
काठमाडौँ। जनताको चासो, गुनासो र सरोकारका बारेमा प्रशारित नेपाली टेलिभिजन जगतकै चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनता संग’ का प्रस्तोता एवं चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने फेरि एक पटक बिबादमा तानिएका छन् । न्युज ट्वान्टीफोर टेलिभिजनमा हरेक शनिबार, मंगलबार र बिहीबार प्रशारित हुने चर्चित कार्यक्रम “सिधा कुरा जनता संग” मा नेपाली जनताका गुनासाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा प्रशारण हुँदै आएकाे छ। गलत प्रवृत्ति, गलत ब्यक्ती, भ्रष्टाचारी ठेकेदार,...
कुनै पनि नारीले बिहे नगरी आमा बन्न पाउने गरी कानुन बनेसँगै समाजमा अनेकथरी बहस सुरु भएको छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा प्रचलनमा आइसकेको यो कानुन नेपालका लागि बन्दा बहसको विषय बन्नु अस्वभाविक भने होइन । किनकि, पितृसत्ताले गाँजेको देशमा महिलालाई विवाहबिना नै आमा बन्ने कानुनी अधिकार दिनु ठूलो कुरा हो । ‘आफ्नो शरीरमा आफ्नै हक’ भन्दै आन्दोलन गरिरहेका महिला अधिकारकर्मी र पश्चिमा समाजको प्रभावबाट ग्रस्त...